WhatsApp hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dirto oo aad hesho GIFs | Wararka IPhone
Waxaan ku laabaneynaa wararka ku saabsan codsiga fariimaha deg dega ah ee ismaamulka. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, waxaan ka wada hadalnay WhatsApp, oo waxaan goor dhaweyd helnay cusboonaysiin u muuqatay in yar oo dad badani u muuqato, maxaa yeelay isbeddellada ayaa yaraa. Si kastaba ha noqotee, soosaarayaasha WhatsApp waxay had iyo jeer jeclaayeen inay ku qariyaan faahfaahinta mustaqbalka koodhkan, si ay uga baxaan duullimaadka ka dambeeya dhegahayaga. Xaaladdan waxaan ku aragnay gacanta koowaad sida GIF-yada si fudud loogu diri karo loona heli karo WhatsApp, sidaa darteed waxaan hubnaa in cusbooneysiinta ugu dambeysa ee arjiga ay imaaneyso toddobaadyada soo socda.
Hadda, Si tan loo xaqiijiyo, waxaan adeegsanay Cydia Tweak oo noo ogolaatay inaan awood u siino shaqadan qarsoon ee ku jirta lambarka WhatsApp. Waagii hore, si wax looga beddelo shaqooyinkan qarsoon, waxaan u adeegsan jirnay lambarka WhatsApp qoraal cad, laakiin kakanaanta maanta ayaa sii adkeyneysa adeegsiga habkan. Si ka duwan shaqooyinka kale sida wicitaanada fiidiyowga, ma awoodno inaan helno hawsha GIF si ay ugu shaqeyso aaladaha hela noocyada noocan ah, laakiin waxaan awoodnay inaan daawanno oo keydinno. Tan awgeed waxaan u isticmaalnay GIF oo saaxiibkeen "Franini" oo ka socda Forocoches uu noo soo diray.
Tweak gabi ahaanba waa bilaash, in kastoo aanan kugula talineynin rakibideeda, maadaama aad awoodi doontid inaad dirto GIF-yada naftaada, isticmaaleyaasha kale waxay awoodi doonaan oo kaliya inay daawadaan. Muunad ahaan, waxaa loo soo bandhigi doonaa sida horudhaca sawirada laakiin dhaqdhaqaaqa, astaamaha GIF oo kooban. GIF-yadaas waa la keydin karaa WhatsApp-ka ayaa aqoonsan doona iyaga, laakiin waa keliya marka la hawl-geliyo. Sidoo kale, markaad hesho GIF, waxay u muuqan doontaa sida "GIF" qoraalka ku qoran shaashadda sheekada. Waxaan rabnay inaan marka hore kuu soo gudbino warkaan cajiibka ah. Marka u soco diyaarinta aruurintaada sawirrada dhaqaaqa, maxaa yeelay kooxaha waxay noqonayaan ilo GIFs ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » WhatsApp hadda waxay ogolaaneysaa dirista iyo helitaanka GIF-yada
Shaqeynta weyn ee ka dambeysa siibashada Telegram, laakiin waxay uga fiican tahay sidii hore weligeed.
By habka, aNtonomasia ma aUtonomasia.
Cosmos Rings, RPG loogu talagalay Apple Watch, hadda waa la heli karaa